Informations – Subas Niraula
‘FaceApp’ प्रयोग गर्नेहरु सावधान ! यसकारण छ खतरनाक
म बुढो हुँदा कस्तो हुँला ? भन्ने उत्सुकता सबै तन्नेरीहरुमा हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले सोसल मिडियामा युवायुवती हरुले फेसएपले बुढो बनाएको आफ्नो अनुहार पोष्ट गरिरहेका छन् । तर तपाइँ आफ्नो बुढोपनाको तस्वीर पोष्ट गरिरहँदा जति रोमाञ्चित भैरहनुभएको छ त्यसले तपाइँलाई खतरामा पनि धकेलिरहेको हुन्छ । किनकी यो एप प्रयोग Read more…
By Subas Niraula,9months ago July 20, 2019
फेसबुक विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल नेटवर्किङ्ग प्लाटफर्म हो । विश्वका करोडौँ मानिसहरु फेसबुकको माध्यमबाट आफ्ना साथी तथा परिवारसँग जोडिइरहेका छन् । तथापि पछिल्लो केही समय यता डाटा लिक तथा ह्याकिङ्गका घटनाले फेसबुकको सेक्योरिटी तथा प्राइभेसी नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अनि प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकमा आफ्नो सुरक्षा र गोपनियतालाई लिएर चिन्ता Read more…
By Subas Niraula,9months ago July 2, 2019
मोबाइलमा ब्याट्री टिकाउँने तरिका
पछिल्लो समय मोबाईल फोनले घडि, क्यामरा, रेडियो लगायतका काम गर्ने भएको छ । धेरैको दिनभरकिो सहारा बन्दै आएको छ मोबाईल सेट । तर, धेरै जसो स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । केहि सामान्य कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यो तनावबाट मुक्त हुन सकिन्छ । १) पटक–पटक Read more…
By Subas Niraula, 1 year ago November 24, 2018
गुगल कसरी बन्यो सर्च इन्जिनको बादशाह ?
तपाइँलाई केही प्रश्नको जवाफ थाहा छैन वा कुनै द्विविधा छ वा कुनै विषयको बारेमा तपाइँलाई धेरै जानकारी चाहिएको छ भने के गर्नुहुन्छ ? धेरैको जवाफ हुन्छः गुगल गर्छु । गुगल अहिले हाम्रो दैनिक जिवनीको हिस्सा बनिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले गुगललाई आफ्नो साथी तथा शिक्षक भन्दछन् । गुगल यहीँ Read more…
By Subas Niraula, 1 year ago October 20, 2018
स्मार्टफोन तात्ने समस्या छ ? चिन्ता नगर्नुस, अपनाउनुस् यी ५ टिप्स
तपार्इं हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन कुनैपनि बेला तात्न सक्दछ । प्रयोग गर्दागर्दै स्मार्टफोन तातेको बेला के गर्नुहुन्छ ? फोन चलाउन छाडेर गोजीमा राख्ने, कानबाट हटाउने, गोजीबाट निकाल्ने आदि आदि । कहिलेकाहीँ नचलाउँदा नचलाउँदै पनि फोन तात्ने समस्या आउन सक्दछ । आखिर फोन अनायासै तात्नुको कारण के हो ? वास्तवमा यसका Read more…
युट्युबमा मिनी प्लेयर फिचर, ब्राउज गर्दै भिडियो हेर्दै
भिडियो स्ट्रिमिङ्ग प्लेटफर्म युट्युबमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै नयाँ फिचरहरु थप गरिरहेका छन् । पछिल्लेपटक युट्युबले यस्तो नयाँ फिचर थप गरेको छ, जुन प्रयोगकर्ताका लागि निकै उपयोगी हुनेछ । युट्युबले थप गरेको नयाँ फिचरको नाम हो, मिनी प्लेयर ।युट्युबको तल्लो बारमा एउटा बक्स जस्तै मिनी प्लेयर बटन दिइएको Read more…
अब छिट्टै नै नेपाली भाषा लगायत देवनागरी लिपिमा इन्टरनेट डोमेन आउदै …
इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम हान्नुपर्छ । तर, चाँडै नै नेपाली भाषामा पनि इन्टरनेटको डोमेन नेम उपलब्ध हुने भएको छ । विश्वभर इन्टरनेटको डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था ‘इन्टरनेट कर्पोरेशन फर एसाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स’ (आईसीएएनएन) दक्षिण एसियामा Read more…
By Subas Niraula,2years ago September 1, 2018
के तपाइलाई थाहा छ, लोकेसन अफ गर्दापनि गुगलले गरिरहन्छ तपाइलाई निगरानी
केही समय पहिले गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्तामाथि गर्ने निगरानीका विषयमा सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भएको थियो । जस अनुसार फोनमा लोकेसन अफ गर्दा पनि गुगलको एप्सले प्रयोगकर्ताको लोकेसन ट्रयाक गर्ने गरेको खुलासा भएको थियो । यस विषयमा गुगलको आलोचना भैरहेको बेला गुगलले उक्त कुरालाई स्विकार गरेको छ । साथै गुगलले वेबसाइटमा लोकेसन Read more…
के Google+ बन्द हुदै छ ?
सन् २०११ मा निकै तामझाम तथा चर्चाका साथ गुगलले आफ्नो सोसल मिडिया प्लाटर्फम गुगल प्लस लञ्च गरेको थियो । तर अथक प्रयासका बाबजुत गुगल प्लसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबीच लोकपि्रयता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । फलतः गुगल प्लस प्लाटर्फमको ढोका बन्द गर्ने अन्तिम टुंगोमा गुगल पुग्न लागेको चर्चा सुरु भएको छ । Read more…
Driving License को Online फारम कसरि भर्ने ?
हामीले दिनहु आफ्नो दैनिकी पुरा गर्न को लागि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा जनको लागि नभई नहुने साधन हो सवारी साधन . त्यसमाथि पनि मोटरसाइकल त अग्रपंति मा आउछ । तर जुनसुकै engine वाला सवारी चलाउनको लागि भने नेपाल सरकार बाट अनुमति लिनुपर्छ, जसलाई Driving License भनिन्छ । आउनुहोस Read more…
By Subas Niraula,2years ago June 11, 2018